Bandhiga Jaamacadaha ee Hargeysa - BBC Somali
Bandhiga Jaamacadaha ee Hargeysa
Image caption Qaar ka mid ah waxyaabihii lagu soo bandhigay carwada Hargeysa
Magaalada Hargeysa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay carwo ay ku soo bandhigeen waxqabadkooda jaamicadaha iyo macaahidda sare ee ku yaalla Somaliland.
Bandhiga waxa uu ka dhacay Hutel Guuleed, waxaana ka qeyb galay ilaa dhawr iyo toban jaamicadood oo ku kala yaalla magaalooyinka Hargeysa, Boorama, Gabilay, Burco, Laacsaanood, Berbera iyo Ceerigaabo.
Waxaa kaloo iyana ka dhex muuqday bandhiga macaahid soo saara kalkaaliyaasha caafimaadka, dhaqaaleyahanno, iyo dad ku xeel dheer farsamada kombuyuutarada.
Intaas oo dhami waxay soo bandhigeen tacliinta ay siiyaan ardada heerka ay gaadhsiisan tahay iyo qalabka ay u isticmaalaan oo goobta carwada ka muuqda.
Image caption Waa qaar ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay carwada Hargeysa
Waxaa xusid mudan in faracyo jaamacado ku yaalla Itoobiya iyo Kenya oo ka furan Hargeysa ay iyana si weyn uga soo qayb galeen, sida jaamacadda Admas ee Itoobiya iyo jaamicadda Mount Kenya ee dalka Kenya.
Jaamicadda Burco qaybta xoolaha iyo beeraha ayaa soo bandhigtay digadii xoolaha oo gaas lagu karsado cuntada ay ka sameeyeen.
Image caption Waa koox matalaysay qaar ka mid ah jaamacadihii iyo macaahiddii keenay agabkooda carwada Hargeysa
Sidoo kale jaamicadda Nugaal ee Laascaanood ayaa keentay daraasad cusub oo ku saabsan baahida Afrika u qabto hogaamin tayo leh.
Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan oo ku caan ah dhakhtarnimada dhimirka ayaa isna carwada kaga soo qayb galay jaamicad cusub oo lagu baran doono culuumta daaweynta dadka isku buuqa, siiba kuwa raadadka dagaalladu ku reebaan maskaxda aadamaha.
Carwadan oo socon doonta dhawr maalmood oo Axadii bilaabantay waxaa u soo daawsho tegay dadweyne fara badan.